ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်း ၈၆ ခုမှ လူပုဂ္ဂိုလ် ၂၀၀ ခန့်နှင့် တွေ့ဆုံ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်း ၈၆ ခုမှ လူပုဂ္ဂိုလ် ၂၀၀ ခန့်နှင့် တွေ့ဆုံ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးတွင် ယနေ့ နိုင်ငံတော် သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် အရပ်ဖက် လူ့အဖွဲ့ အစည်း ၈၆ ခုမှ လူပုဂ္ဂိုလ် ၂၀၀ ခန့်နှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ပြောကြားသည့် သမ္မတ မိန့်ခွန်းမှ ကောက်နှုတ်ချက် တချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
“အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ကျွန်တော်နဲ့ အလုံးစုံတူညီရမယ်လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါ ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး နိုင်ငံရေး တည်ဆောက်ရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည်စည်းလုံညီညွတ်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ တူညီတာတွေကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ် တာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
မတူညီမှုတွေကိုလည်း ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကို ကျော်လွန်တဲ့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း မှု နည်း လမ်းနဲ့ အဖြေရှာပြီး လက်တွဲလုပ်ဆောင်သွားကြဖို့ ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုတောင်း ဆို ရခြင်းဟာလည်း ပြည်တွင်းပြဿနာအမျိုးမျိုးနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ အနေ နဲ့ ခေတ်မီတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းထူထောင်ရန်နဲ့ ခေတ်မီအမျိုးသားစီးပွားရေးတစ်ရပ်ပိုင်ဆိုင်နိုင် ဖို့ အရေးတကြီး လိုအပ်နေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် တောင်းဆို တိုက်တွန်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ ဖြစ်ထွန်းမှုများမှာ အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ အခန်း ကဏ္ဍ အရေးပါမှုကို အမှန်တကယ် ယုံကြည်ကြောင်း ဦးစွာပြောကြားလိုက်တယ်”
This entry was posted on January 20, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← Thais open hearts to Rohingya, bringing supplies and sympathy
ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် အီရန်မှ ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများ ဆောက်လုပ်ပေးရန် သဘောတူညီမှု ရရှိ →